Universal Online TV | बिहान ढिला उठ्नुहुन्छ? त्यसो हो भने तपाइलाई लाग्न सक्छ यस्ता भयानक रोग बिहान ढिला उठ्नुहुन्छ? त्यसो हो भने तपाइलाई लाग्न सक्छ यस्ता भयानक रोग
प्रकाशित मिती: १८ मंसिर २०७४, सोमबार
यतिमात्र होइन, पर्याप्त निन्द्राले मोटोपना, मधुमेह, हृदय रोग र समयपूर्व मृत्युको सम्भावना निकै कम हुन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि कम सुत्दा शरिर र दिमागमा नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ तर धेरै सुत्दा शरिरमा पुग्ने नकारात्मक असरबारे जानकार हुनुहुन्छ तपाईं ?
यदि तपाईं बिहान अबेर उठ्नुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो व्यवहारमा थुप्रै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । यसको सिधा असर हाम्रो दिमाग र हर्मोन्समा पर्ने गर्दछ ।
किनभने यस्ता मानिसहरुको दिमागमा ह्वाइट म्याटर सबैभन्दा खराब स्थितीमा हुन्छ । त्यसकारण तपाईं तनाव र डिप्रेशनमा रहनुहुन्छ भने यसको मुख्य कारण अबेरसम्म सुत्ने तपाईंको बानी हो ।
तपाईंले चाँडै सुतेर बिहान चाँडै उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ किनभने यसले हामीलाई स्वस्थ वातावारण पाउन सहयोग गर्दछ । बिहान न त वातावरणमा त्यति प्रदुषण हुन्छ न नै हल्ला खल्ला । बिहान चाँडै उठ्दा हामीले ऊर्जा र बुद्धि पाउँछौं ।
हरेक व्यक्तिका लागि ८ घण्टा सुत्नु उचित हुन्छ । सधैं अलार्म राखेर सुत्ने कोसिस गर्नुहोस् । ८ घण्टाभन्दा बढि सुत्दा शरिरका विभिन्न भाग दुख्न सुरु गर्दछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् – मसाजका यी १० फाइदा अनि ध्यान राख्नुपर्ने कुराहरू
यो पनि पढ्नुहोस् – साबधान ! राती सुत्दा अन्डरवेयर लगाएर सुत्नुहुन्छ ?